मलिलो भूगोलका अल्छी नागरिक- विचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन ७, २०७६ मञ्जु भट्ट
जहाँ ढुङ्गा–ढुङ्गामा देवताको बास छ
जहाँ थुम्का–थुम्कामा स्वर्गको आभास छ
यो देश मेरो हो, यो देश मेरो हो ।
साँच्चै हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रण रहेको, विश्वको जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्र क्षेत्रफल ओगटेको हाम्रो सानो देशमा ६ हजारजति त नदीनाला मात्रै छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ८ वटा यहीँ छन्् । हिमालहरूबाट हिउँ पग्लिरहेका बेला तराईमा लु लाग्ने हाम्रो देश विविधताले भरिपूर्ण छ । न धेरै गर्मी न धेरै जाडो हुने पहाडको वातावरण विभिन्न फलफूल उत्पादन गर्न एकदमै उपयुक्त छ । तराईलाई अन्नको भण्डार नै मानिन्छ । बारी वा कान्लामा जे छरे पनि उम्रिहाल्ने यस्तो उपकारी भूगोलका हामी बासिन्दा एक छिन आफ्नो माटो खोस्रिनुका दुःखले विदेशतिर चौबीसै घण्टा हाड घोट्नमा रमाइरहेका छौं ।
भारत र चीनबाट लसुन, प्याज आयात नभए हाम्रो भान्सा खल्लो हुन्छ, जबकि यस्ता चीजबिज आफ्नै करेसाबारीमा उमार्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ अर्बको फलफूल आयात भएको थियो भने, तीन वर्षपछाडि त्यो १० अर्बमा पुग्यो । तीन वर्षअघि ७ अर्बको तरकारी आयात भएकामा अहिले त्यसकै लागि १४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । योसँगै सबैजसो खाद्यान्नको आयात झन्डै दोब्बर भएको छ । पौरखी हातहरूले स्वदेश छाड्दाको दुष्परिणाम हो यो ।
लसुन, प्याजजस्ता छिटो प्रतिफल दिने बालीमा न धेरै मेहनत चाहिन्छ, न त लामो समय कुर्नैपर्छ । तराई तथा पहाडमा प्रशस्त जमिन बाँझै बस्ने गरेको छ । त्यस्ता ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा मौसम अनुसारका तूलफूल लगाउन सकिन्छ । बाख्रा पालन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ । अहिले गाउँघरमा एउटै भैंसी एक लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन थालेको छ । एक किलो घिउकै हजार रुपैयाँ पर्छ । नजिकै जंगल भएका गाउँका घर–घरमा चार–पाँच भैंसी मात्रै पाल्न सके पनि आजीविका चलाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य, पहाडका गाउँहरू वनजंगलले ढाकिँदै गएका छन् । काम गर्ने जाँगरिला युवाहरू घरबाहिर हुँदा कतिपय परिवार पूरै विस्थापित हुन पुगेका छन् ।
विदेशमा काम गर्दा पैसा धेरै हात लाग्ने भए पनि त्यसले आत्मसन्तुष्टि दिँदैन । आफ्नो परिवारसँगै बसेर काम गर्दा हुने खुसी परदेशको तलबले पनि दिन सक्दैन । अहिले सरकारले कृषि, पशुपालनजस्ता व्यवसाय गर्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ । मेहनती किसानलाई अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्थासमेत छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिन धक नमान्ने युवा पुस्ताले यस्ता सरकारी योजनाहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छन् ।
युवाहरूलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि धेरै कसरत गर्नु जरुरी छ । भारत लगायतका देशबाट आयात हुने फलफूललाई विस्थापित गर्न हाम्रो देशमा फलेका फलफूलले बजार पाउनुपर्छ । दुर्गममा फलेका स्याउहरू सडक सञ्जालको अभावले रूखमै कुहिने वा गाईभैंसीलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यताको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारको बेवास्ताले बिचौलियाहरूका कारण किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । उचित भुक्तानी नपाउँदा तरकारी, दूध सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्न सरकारले हरदम निगरानी गर्नुपर्छ । मेहनती किसानहरूको अवस्था वर्षौंसम्म उस्तै रहनु तर बिचौलियाहरू छोटो समयमै मोटाउँदै जानु क्षम्य विषय होइन । भगवान्को अर्को रूप नै अन्न उब्जाउने किसान हुन् भन्ने बिर्सन हुन्न ।
गाउँघरमा समयमै सडक सञ्जाल पुगेको भए विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित थियो । सरकारले देश विकासमा ध्यान दिएको भए पूर्व–पश्चिम लम्बाइ जम्मा ८८५ किलोमिटर रहेको हाम्रो सानो देशमा अहिले पनि काठमाडौंबाट घर पुग्न चार दिन लाग्दैनथ्यो । सरकारका तर्फबाट कलकारखाना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्कुल, कलेजहरूको गाउँमै व्यवस्था भएको भए गाउँ छोडेर युवाहरू सहर पस्ने वा विदेशतिर हान्निने वातावरण बन्दैनथ्यो । युवाहरूका यस्ता समस्यालाई न त पञ्चायतले बुझ्यो, न प्रजातन्त्र आएपछि बुझ्ने कोसिस गरियो, न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेको छ । पहिला खुलेका कलकारखाना बन्द हुनु र नयाँ कलकारखाना खुल्न नसक्नुले परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । युवा बेरोजगारी बढ्दो छ ।
भक्तपुरमा सात वर्षदेखि चौबीसै घण्टा ग्यास बलिरहेको छ । त्यो ठाउँमा कच्चा पदार्थको भण्डार हुन सक्छ । तर लाग्छ, सरकारलाई यसबारे चासो छैन । वर्षौंपहिले उडान सुचारु गरेका विमानस्थलहरू अहिले चरिचरनमा परिवर्तन भएका छन् । चीनले हजार शय्याको अस्पताल दस दिनमा निर्माण गर्न सक्छ भने हाम्रो सरकारले दस वर्षमा दुर्गममा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सक्दैन ? एक चोटिकै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर हेलिकप्टरबाट एक बिरामीको उद्धार गर्नुभन्दा दुर्गमका हजारौं जनताका लागि दुर्गममै अस्पताल खोल्नु उपयुक्त होइन ? वर्षेनि फ्रिज हुँदै जाने बजेटलाई यस्ता काममा लगाउन कसले रोकेको छ ?
यातायात अभावमा अहिले पनि धनकुटाको साँगुरीगढी–७, सिङखोलाका बालबालिका दिनहुँ दुई घण्टा हिँंडेर स्कुल जान बाध्य छन् । दैलेखको तल्लो डङ्गेश्वरस्थित महादेव माविमा पढ्ने वादी समुदायका विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलबमा खर्च भइरहेको छ । हालै मात्र ज्वरोको औषधि नपाएर हुम्लामा सात जनाको मृत्यु भएको छ । गाउँका सबै बिरामी छन्, तर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका एक सदस्यले ६ लाख अनुदान लिएर करेसाबारीमा जम्मा ६६ वटा काउलीका बेर्ना रोपे पनि स्याहारको अभावमा माटोमै हराएका छन् ।
त्यसै गरी, १३ लाख अनुदान लिएर ५० बोट कागती लगाएको खुलेको छ । २०५७ सालदेखि नै बिजुली बाल्न थालेका मंगलसेन नगरपालिकाको डाँडीगाउँका बासिन्दा सामान्य खराबी आएको मेसिनको मर्मत–सम्भार हुन नसक्दा ६ वर्षदेखि फेरि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । यस्ता साना लाग्ने तर अति महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा जनताले सधैं दुःख झेल्नुपरेको छ ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त पुग्नुपर्छ, तर हराभरा पहाडहरूलाई डोजरले तहसनहस बनाउन होइन कि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न । यस्तो हुन सके लसुन–प्याजकै लागि चीन र भारतको मुख ताक्नुपर्दैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:३२
फस्टाउँदै हुन्डी कारोबार
युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा अवैध रुपमा जाने नेपालीले हुन्डीबाट एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेका छन् ।
फाल्गुन ७, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — प्रहरी परिसर काठमाडौंले पुस अन्तिम साता सुन्धाराको होटल न्यु क्यासलमा काम गर्ने २५ वर्षीय सुरेश मल्ललाई पक्राउ गर्‍यो । ठगीसम्बन्धी कसुरको उजुरी परेपछि पक्राउ परेका उनको बैंक खाता अध्ययन गरेपछि प्रहरी चकित भयो । सामान्य हैसियतका होटल कर्मचारी मल्लको बैंक खाताबाट दुई वर्षमा मात्रै २० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार भएको थियो ।
अनुसन्धानमा संग्लन एक प्रहरी भन्छन्, ‘उनको खाताबाट भइरहेको कारोबारमा पर्दा पछाडि अरूको भूमिका छ छैन भन्ने खुलिसकेको छैन । तर अस्वाभाविक कारोबारको तार संगठित रूपमा भइरहेको मानव तस्करी र त्यस क्रममा हुने हुन्डी कारोबारसँग जोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
कुनै व्यापार र व्यवसायको पृष्ठभूमि नभएका मल्लको खातामा पैसा हाल्नेहरू को–को हुन् र कहाँबाट कुन प्रयोजनका निम्ति त्यत्तिका धेरै पैसा हालिएको हो भन्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । मल्ल पक्राउको पृष्ठभूमिमा संगठित मानव तस्करीको एउटा घटना जोडिएको छ ।
बाँकेको सुनारी गाउँपालिका–३ का ३८ वर्षीय सर्जन केसी र रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय बुद्धिप्रसाद घर्ती अमेरिका जान भन्दै २०७५ फागुन १३ गते मलेसियाको क्वालालम्पुर ट्रान्जिट बनाएर पर्यटक भिसामा इन्डोनेसियाको बाली पुगेका थिए । होटल तथा स्टोरमा काम लगाइदिने र मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने आश्वासनका भरमा अमेरिका जान तयार भएका दुवैलाई एजेन्टले २७ लाख रुपैयाँ लाग्ने र आधा पैसा सुरुमै र आधा रकम इन्डोनेसिया पुगेपछि दिनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।
उनीहरूलाई अमेरिका छिराउने जिम्मा लिएका एजेन्टले भोलिपल्टै सिंगापुर हुँदै अमेरिका लैजाने बताएपछि उनीहरू दुवैले एजेन्टले भनेकै मान्छेको हातमा नगदै १० लाख थमाइदिए । त्यसपछि एजेन्टले भनेअनुसार सुरुमा देवकोटाको खातामा दस लाख र मल्लको खातामा नौ लाख जम्मा गरिदिए ।
१४ दिनसम्म बालीको होटलमा राखेपछि सिधै सिंगापुर जान नमिल्ने भन्दै एजेन्टले उनीहरूलाई इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबा पुर्‍याए । प्रत्येक नयाँ गन्तव्यमा पुगेपछि एजेन्टले उनीहरूलाई नयाँ मान्छेको खाता नम्बर दिइन्थ्यो र भनिन्थ्यो, ‘त्यो खातामा रकम जम्मा गर्नु अनि मात्र बाँकी काम हुन्छ ।’ अदिस अबाबामा इथियोपियाबाट इक्वेडर हुँदै अगाडि जानुपर्ने र भिसाका लागि पैसा लाग्ने भन्दै एजेन्टले उनीहरूलाई तीन जनाको खाता नम्बर दिए । अमेरिका पुग्ने सपना सजाएर हिँडेका उनीहरूले एजेन्टले भनेअनुसार नै उनीहरूको खातामा रकम जम्मा गरिदिए । प्रहरीमा दर्ता गरिएको जाहेरी दरखास्तमा मुख्य एजेन्टले उनीहरूलाई आफूले भनेअनुसारको खातामा रकम जम्मा गरिदिएपछि त्यस्तो रकम हुन्डीमार्फत आफूकहाँ आउने बताएको देखिन्छ ।
इक्वेडर जान हिँडेका उनीहरूलाई अदिस अबाबास्थित विमानस्थल अध्यागमनले कागजात नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइदियो । त्यसपछि एजेन्टले उनीहरूलाई थाइल्यान्ड हुँदै इन्डोनेसियाको जकार्ता भएर सिंगापुर पुर्‍याइदिने बाचा गर्‍यो । उनीहरू सिंगापुर पुगे तर अध्यागमनको जाँचमा एक हजार डलर साथैमा हुनुपर्ने सर्त पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूलाई इन्डोनेसिया फिर्ता पठाइयो ।
इन्डोनेसिया फर्केको केही दिनसम्म एजेन्टले उनीहरूलाई भियतनामको बाटो हुँदै अमेरिका छिराउने आश्वासन दिएका थिए । तर केही दिनपछि एजेन्ट नै सम्पर्क बाहिर भए । अमेरिका जाने सपना बीचैमा अलपत्र परेपछि उनीहरू नेपाल फर्कने प्रक्रियामा लागे । ‘ओभर स्टे’ को आरोपमा १४ दिन अध्यागमन हिरासतमा बसेर उनीहरू मंसिर १३ गते नेपाल फर्के ।
संगठित मानव तस्करीको फन्दामा परेर इन्डोनेसियाबाट फर्केका पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले यो घटनाबारे अनुसन्धान थाल्यो । मानव तस्करीको घटनामा हुन्डी पनि जोडिएको देखिएपछि प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान नयाँ शिराबाट बढाएको छ । त्यही क्रममा मल्ल पक्राउ परेका हुन् ।
ब्युरोका अनुसार मानव तस्करीको फन्दामा परेका अधिकतर पीडितले विभिन्न देशमा बसेका तस्करीका विभिन्न एजेन्टलाई बुझाउने रकम हुन्डीमार्फत प्रवाह हुने गरेको देखिन्छ । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलियाका अनुसार बोलिभिया, इक्वेडर, पानामादेखि भारतका विभिन्न सहर, बैंककदेखि दुबईसम्म फैलिएका मानव तस्करीका एजेन्टले पीडितबाट असुलेको रकम हुन्डीबाटै परिचालन गर्ने गर्छन् । ‘मानव तस्करी सँगसँगै हुन्डीको कारोबार, कालो धनको ओसारपसार र मनी लाउन्ड्रिङ पनि समानान्तर रूपले चलिरहेका छन्,’ थपलियाले भने ।
त्यसो त पछिल्ला २० महिनामा मात्रै अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुगेर ‘डिपोर्ट’ भएकाहरूले मात्रै २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै गुमाएको देखिन्छ । ब्युरोका अनुसार पीडितहरूले एजेन्टलाई बुझाएको यतिका धेरै रकममध्ये ठूलो हिस्सा हुन्डीबाटै प्रवाह भएको छ । जस्तो, गत मंसिरमा मात्रै अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने भन्दै हिँडेका ४ जनालाई अफ्रिकी देश मलावीबाट, ५ जनालाई इन्डोनेसियाबाट र ६ जनालाई इथियोपियाबाट उद्धार गरिएको थियो । ब्युरोले लिएको प्रारम्भिक बयानमा १५ जनाले महिनौं लामो अवैध यात्रामा दुई करोडभन्दा धेरै रकम फसाएको देखिन्छ । पीडितहरूका अनुसार उनीहरूले अवैध यात्राका क्रममा देशपिच्छेका एजेन्टलाई बुझाउने रकमदेखि यात्रामा आवश्यक व्यक्तिगत खर्चसमेत हुन्डीबाटै प्राप्त गरेका थिए ।
संगठित मानव तस्करीमा हुन्डीको सम्बन्ध कसरी कहाँ–कहाँसम्म फैलिएको छ भनेर बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मानव बेचबिखनको एउटा मुद्दालाई हेर्न सकिन्छ । २०७६ जेठ २७ मा दाङ घोराहीका एक युवालाई संगठित मानव तस्करले आफूलाई झुक्याएर भारतको दिल्ली हुँदै रसिया, कोस्टारिका, पानामा, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरु, बोलिभिया, स्पेन, मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुर्‍याएको र उनी १७ महिना थुनामा बसेर नेपाल डिपोर्ट भएको घटनामा प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।
सिंहदरबार १५ (परिवर्तित नाम) का नाममा दर्ता भएको त्यस मुद्दामा पीडितले ग्वाटेमाला, निकारागुवा र होन्डुरसमा आफूलाई बन्धक बनाएर पीडितले पैसा असुलेको बताएका छन् । प्रहरीसँगको बयानमा पीडितले साउदी अरबमा रहेका आफ्ना बाबुले समेत हुन्डीमार्फत एजेन्टलाई पैसा पठाएको बताएका थिए । यस मुद्दाका प्रतिवादी दाङका टोपबहादर जीसीले पीडितलाई विदेश पठाउने क्रममा विभिन्न देशका एजेन्टसँग बारम्बार सम्पर्क गरेको तथ्य प्रहरीले उनको मोबाइल कल डिटेलबाट पत्तो पाएको थियो । अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा जीसीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका एजेन्टसँग २७३ पटक, भारतमा रहेका एजेन्टसँग ३०७ पटक, मलेसियामा रहेका एजेन्टसँग १३ पटक, मेक्सिकोमा रहेका एजेन्टसँग १० पटक, क्यानडा र अमेरिकामा रहेका एजेन्टसँग ६ पटक कुराकानी गरेको देखियो ।
इन्डोनेसिया र होन्डुरस, ग्वाटेमाला, पानामा र बोलिभियामा रहेका एजेन्टसँग पनि बारम्बार उनको टेलिफोन सम्पर्क रहेको देखिएको थियो । मानव तस्करीको यही मुद्दामा मुछिएका अर्का प्रतिवादी मुकुन्दराज जीसीले अमेरिकामा रहेका एजेन्टसँग १२ पटक, भारतमा रहेका एजेन्टसँग ४० पटक र साउदी अरबमा रहेका एजेन्टसँग एकपटक कुराकानी गरेको देखिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली एजेन्टको सम्पर्कमा रहेका सबैजसो विदेशी एजेन्टको हातमा हुन्डीमार्फत नै पैसा पठाउने गरेको देखिन्छ ।’
मानव तस्करको सञ्जालमार्फत कामको खोजीमा युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा अवैध रूपमा छिर्न हिँडेका नेपालीले पनि हुन्डीकै माध्यमबाट एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूको कमाइको ठूलो हिस्सा पनि हुन्डीमार्फत नै नेपाल भित्रिन्छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीको बुझाइमा हुन्डी कारोबारीको सक्रियता खाडीलगायतका देशमा रहेका कामदारको पैसा बैंकिङ प्रणाली छलेर आइरहेको देखिन्छ ।
‘मानव तस्करीका निम्ति कस्तो प्रकृतिको हुन्डीमार्फत कति पैसाको कारोबार भइरहेको छ भन्नेबारे प्रहरीसँग यकिन तथ्यांक छैन तर यति भन्न सकिन्छ, मानव तस्करहरूले पीडितबाट हुन्डीकै बाटो प्रयोग गरी पैसा बुझ्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा १७१ खर्ब रुपैयाँको अवैध कारोबार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । भूमिगत रूपमा सञ्चालित खर्बौं रुपैयाँको यस्तो कारोबारमा नेपालको हिस्सा कति छ भन्नेबारे प्रहरी र अन्य सरकारी निकायसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हुन्डी कारोबारका २५ घटनामा ५३ जना पक्राउ परेका छन् भने उनीहरूबाट ५ करोड ६५ लाख ३५ हजार ५७० रुपैयाँ बरामद भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने प्रहरीले अघिल्लो वर्षभन्दा निकै थोरै मान्छेलाई हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको देखिन्छ । यो वर्ष प्रहरीले हुन्डीका ८ घटनामा २५ जनालाई पक्राउ गरी २९ करोड ९१ लाख ६६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ बरामद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को माघसम्म प्रहरीले हुन्डी कारोबारका २६ घटनामा ४२ जनालाई पक्राउ गरी २३ करोड ४७ लाख ५५ हजार २० रुपैयाँ बरामद गरेको छ ।
प्रवक्ता डीआईजी क्षत्रीका अनुसार हुन्डीको बढ्दो कारोबारले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्ने खतरा हुन्छ । उनले भने, ‘अवैध सुनको कारोबारमा पनि हुन्डी कारोबारको सम्बन्ध देखिन्छ । मानव बेचबिखन र तस्करीका घटना पनि हुण्डीकै बलमा भएको देखिन्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:२८